Hargeysa”Wiil Rasaas Uu Furey Ku Khaarajiyay Aabihii Kuna Dhaawacay Nin Kale Iyo Sababta Keentay Shilka | Berberatoday.com
Hargeysa”Wiil Rasaas Uu Furey Ku Khaarajiyay Aabihii Kuna Dhaawacay Nin Kale Iyo Sababta Keentay Shilka
Hargeysa(Berberatoday.com)-Wiil dhalinyaro ah ayaa maanta badhtamaha magaalada hargeysa rasaas uu furey ku khaarajiyay aabihii halka uu ku dhaawacay nin kale.
Waxaana dilkan uu ka dhashay kadib markii wiilka aabihii iyo nin kale uu dhex maray muran dhuleed oo ay isku haysteen labadan nin muddo badan sida ay warbaahinta u xaqiijyeen dad ka agdhawaa goobta dilku ka dhacay.
Waxaana wiilka aabihii iyo ninka kale oo sida la sheegay aad isku maandhaafsanaa goobta soo istaagay wiilkan oo sita qori AK 47 Ah,waxaana uu rasaas ku furey ninkii ay aabihii dhulka isku haysteen isaga oo halkaasi ku dhaawacay,intaasi ka dib ayaa sida naloo sheegay aabihii wiilka dhalay ayaa is yidhi qoriga ka qabo wiilka waxaana uu markiiba wiilkii Si kama ah ama aanu Ukasin aabihii rasaas ku furey aabihii,isagoo rasaastaasi markiiba sida naloo sheegay uu ugeeriyooday aabuhu.
Aabahan geeriyooday ee wiilkiisu diley ayaa lagu magacaabaa Marxuum Cabdilaahi Xaaji Muuse oo Lagu Naanaysi Jiray Xiniinyo Cun waxaanu Geerash gaadiidka lagu sameeyo Kulahaa Agagaarka Suuqa Gobonimo ama Fooqa Xisbiga,waxaana maydka marxuunka iyo dhaawaca ninka kaleba loosoo qaaday cusbitaalka wayn ee magaalada hargeysa.
Dhanka kale wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in wiilkii dilka gaystay uu Xabsiga loo taxaabay.